सुब्बाको ‘वनचरी’ सार्वजनिक « Lokpath
२०७७, २२ आश्विन बिहीवार १८:४२
सुब्बाको ‘वनचरी’ सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २०७७, २२ आश्विन बिहीवार १८:४२
काठमाडौं । कलाकार भूमिका सुब्बाको नयाँ गीत ‘वनचरी’ सार्वजनिक भएको छ । ओएसआर डिजिटल युट्युब च्यानलबाट आज गीत सार्वजनिक भएको छ ।
गीतमा एक नारीको जीवनयात्रालाई समेटिएको छ । एउटी छोरीले जन्मदिने आमाप्रति दर्शाउने अगाध प्रेम र माइती गाउँका ‘नोस्टाल्जिया’ गीतमा प्रस्तुत गरिएको गीतकार सुब्बाले बताए। गायिका एलिना चौहानको स्वरमा सजिएको सो गीतमा पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा रुचाइएका कलाकार लक्ष्मी बर्देवाले अभिनय गर्नुभएको छ । साजन राईको सङ्गीत रहेको सो भिडियोको निर्देशन किरण चाम्लिङ राईले गरेका छन् ।
बिजु कर्मचार्यले संयोजन गरेको सो गीत भर्जिन भ्वाइसको स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो । भूपेन्द्र तुम्बाहाङ्फेले छायाङ्कन गरेको भिडियोमा काठमाडौं उपत्यका आसपासका ग्रामीण क्षेत्रका दृष्यसमेत समेटिएको छ ।
सुब्बाका मालिङ्गो सैसै, भूमिका र सङ्गिनी गरी तीन एकल एल्बम तथा आधा दर्जनभन्दा बढी संयुक्त गीतिसङ्ग्रह बजारमा आएका छन् । बाल्यकालबाटै कलामा क्षेत्रमा लागेका जनवादी गायिका सुब्बा पछिल्लो समय गीत लेखनमा समेत लागेका छन् । रासस
यस्तो बन्यो ‘कृष्ण–लीला’ को ‘डियर बन्न मन छ’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चैत्र २७ मा प्रदर्शन हुने बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘कृष्ण–लीला’ को दोश्रो गीत
रघुजी पन्तविरुद्ध कलाकारहरुको आक्रोस, कसले के भने ? (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद तथा कलाकार कोमल वली यतिवेला चर्चाको शिखरमा
संसद विघटनको सिफारिस गर्ने ५ प्रधानमन्त्री, को सफल को असफल ? (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौँ– गत पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टीको नेता तथा गीतकार गंगानारायण श्रेष्ठ (मानव)ले आफ्नो जन्मदिनकै दिन
यस वर्षको महालक्ष्मी साहित्य पुरस्कार डा. नवराज लम्साललाई
banner, राजनीति, लोकपथ हाइलाईट, समाचार
भोलिको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कसरी प्रस्तुत होला कांग्रेस ?
अब सस्तोमै पाउनुहोस् रियलमी ६ आई, घट्यो मूल्य
भिडियो, मनोरञ्जन, संगीत, समाचार